ခရစ်တော်၏တပည့်တော်ဖြစ်စေသည့်နည်းစနစ် | Christ's Method of Making Disciples | Real Conversion
ဇူလိုင်လ ( ၁၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
Lord's Day Morning, July 15, 2018
ရှင်မဿဲ ၁၀း ၁ ကို လှန်ကြည့်ပါ။ ယင်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၀၀၈ ၌ တွေ့ရသည်။ အပိုဒ် ၁ ၏ ပထမထက်ဝတ်ကိုကြည့်ပါ။
“သူ့ထံသို့ တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ဦးကိုသာ ခေါ်သည်…”
“တပည့်တော်” ဟူသောစကားလုံးမှာ ဂရိစကားလုံး “မာထဲလ်သဲ” မှ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆို ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ထိုသို့သောစကားလုံးသည် ဆရာတစ်ပါးထံ၌ တပည့် ခံသောသူတစ်ဦးနှင့် ဆရာနောက်လိုက်သောသူကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်သော တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ ခရစ်တော်က လူဆယ့်နှစ်ယောက်လို့ ခေါ်လေ့ရှိသော သူများကို ပြသပြီး သူတို့ဒုတိယမွေးခြင်းမတိုင်မှီ မည်သို့သင်ကြားပေးသည်ကို ပြသရန်ဖြစ်ပါ သည်။ ဤသည်မှာ ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အများစုက လုပ်လေ့လုပ်ထမရှိသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုလက်ခံသော ပတ္တိကုတ္တ်အမှုတော် ဆောင်များမှစ၍ ဖန်တမင်တဲလ်ကျမ်းသင်ဆရာများအဆုံး၊ ကျွန်တော်သိသမျှသောသူများ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ တူညီသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ သည် လူတစ်ဦးကို ရရှိလျှင် “သင်ကောင်းကင်သွားချင်ပါသလား” ဟုသာ မေးကြသည်။ အများစုက “ဟုတ်ကဲ့၊ သွားချင်သည်” ဟု ပြောသည်အထိ ဖိအားပေးကြသည်။ ဝိညာဉ်ဖမ်းသူ များက “ဤစကားများကို ငါနှင့်အတူ လိုက်ဆိုပြီးဆုတောင်းပါ” ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ စိတ် ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသော လူသစ်၏ပါးစပ်သည် “ဝိညာဉ်ဖမ်းသူ” ၏နှုတ်ထွက်စကားအတိုင်း ထွက်လာသည်။ ၎င်းသည် တရားဒေသနာအဆုံးတွင် “သင်သည် ထိုဆုတောင်းစကားကို လိုက်ဆိုလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်” ဟု ပြောတတ် သော Joel Osteen ၏ စကားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုကောင်းသောအသင်းတော်များ တွင် သူတို့နှင့်အတူဆုတောင်းသောသူတို့၏ နာမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်ထားကြသည်။ ရက် အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ပြောင်းလဲလာသူဟု သတ်မှတ်ကာ “နောက်လိုက်ပေးဖို့” တစ် ယောက်ယောက်ကိုစေလွှတ်ကြသည်။ အတွေ့အကြုံအရဆိုလျှင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းက စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ကို မွေးထုတ်ပေးရန် မလွယ်ကူပါ။ သူတို့နှင့်အတူ ဆုတောင်းသောသူ မှာ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသူတစ်ဦး မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် “ဝိညာဉ်ဖမ်းသူများ” ရှေ့တွင် ပုန်းရှောင်မလား၊ သို့မဟုတ် “အဝေးသို့ထွက်သွား” စေမလား။ သင်သည် သူတို့ကို “နောက် လိုက်ပေးဖို့” ကြိုးစားအားထုတ်လျှင် ကောင်းစွာ ဆက်ဆံတုန့်ပြန်ကြမည်မဟုတ်ပါ။
ဤနည်းစနစ်တွင် အမှားရှိပါသလား။ အသုံးတည့်လေ့မရှိပါ။ အဆင်ပြေဖို့ အရမ်းခက် ခဲပါသည်။ ကျွန်တော်သည် နှစ်ခြင်းသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်နီး နီးရှိလာပြီ။ အတွေ့အကြုံလည်း မနည်းတော့ပေ။ အဘယ့်ကြောင်း ထိုအလုပ် “အဆင်မပြေ” နိုင်ပါသနည်း။ တပည့်တော်များကို မမွေးထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အများ စုက ယေရှုလိုက်သောလမ်းစဉ်ကို မလိုက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သာလျှင်ဖြစ်သည်။
“သခင့်အရာထားသည့်ကယ်တင်ခြင်း” အကြောင်းသင်ပေးနေသည်ဟု သင်က ထင် ကောင်းထင်နေမည်။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်က John MacArthur နှင့် Paul Washer တို့သင် ပေးသော အရာကို သင်ကြားပေးနေသည်မဟုတ်။ “သခင့်အရာထားသည့်ကယ်တင်ခြင်း” ကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်ရသည့်အကြောင်းကိုသိရန်မှာ သေခါနီးလူမျိုးထံ တရားဟောပြောခြင်း အမည် ရှိ ကျွန်တော့်စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပါ။ စာမျက်နှာ ၁၁၇-၁၁၉ တွင်ရှိပါသည်။ စာအုပ်တစ်ခုလုံးကို www.sermonsfortheworld.com ဝပ်ဆိုက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းဟူသည် မှာ ယေရှုခရစ်ကို ကိုးစားယုံကြည်ခြင်းနှင့် အသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ် လာပါသည်။
“အပြစ်သားဆုတောင်းချက်” တစ်ခုကို ကို နောက်က လိုက်ဆိုစေသဖြင့် လူတို့လိုက် ဆိုသည့်နေရာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းတွင် တစ်နေရာလောက် ကျွန်ုပ်ကို ပြပါ။ ယေရှုက ထို သို့လုပ်ဆောင်သည့်နေရာ တစ်နေရာလေးပင် သင်က မပြသနိုင်ပါ။ သူက ပထမဆုံး “ပြုစုပေး” ပါသည်။ သူတို့ပထမဦးစားပေးရမည့်အရာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သိစေပါ သည်။
ယင်းမှာ လူတို့ပြောင်းလဲလာရာတွင် ယေရှုပါဝင်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည် ကိုးစားပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်မှီ တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်း၏ခက်ခဲသောနှုတ်ကပတ်တော် ကို ဦးစွာကြားရဖို့လိုအပ်သည်ကို သိထားပါ သည်။
“သို့သော်” တစ်ဦးဦးက “ခက်ခဲသေနှုတ်ကပတ်တော်က သူတို့ကို ထိတ်လန့်စေမည်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ခက်ခဲသောနှုတ်ကပတ်တော်သည် သူတို့အများစုကို ထိတ်လန့်စေလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၏တပည့်တော်အများစုက သူ့ကို ထားရစ်ခဲ့ကြသည်။ သူနှင့်အတူ နေထိုင်ရန် တောင်းဆိုထားခြင်းမျိုးမရှိကြပါ။ “သင်တို့သည်လည်း သွားကြမည်လော” ( ယောဟန် ၆း ၆၇ )) ဟု တပည့်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကို မေးမြန်းသည်။ အားလုံးတော့ မသွားကြပါ။ ကျန်ရစ်ခဲ့ သောသူသည် ခရစ်တော်၏ခိုင်မာသောတပည့်တော်ကျောက်ဆောင်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော် စစ်သားဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Isaac Watts ၁၈ ရာစုတွင် ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်း၏ ရှေး ဟောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Isaac Watts က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကားတိုင်တော်စစ်သူရဲ၊ သိုးသူငယ်နောက်လိုက်ဖြစ်သည်၊
သူ့အမှုတော်အတွက် မကြောက်ပါ၊ သူ့နာမတော်ကြွေးကြော်ဖို့ မရှက်ပါ၊
စိုးစံမည်ဆို တိုက်ခိုက်ရမည်၊ စိတ်ဓါတ်တွေ မြှင့်တင်ထားလိုက် သခင်၊
ပင်ပန်းမှုကိုသည်းခံ၊ နာကျင်မှုကိုခံစား နှုတ်ကပတ်တော် ပံ့ပိုးလို့ထား။
( “ကားတိုင်တော်စစ်သူရဲတစ်ဦးဖြစ်သလားကျူး?” ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ )။
ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်အတွက် အသွေးနှင့်ပြည့်လျှံသောတိုက်ပွဲထဲသို့ ပထမ ဆုံးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မည့် လူသစ်များကို မျှော်လင့်မထားနိုင်ကြပါ။ သူတို့အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ကြလျှင် ပိုမိုလွယ်ကူပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် ထိုနည်းအတိုင်း ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်မဟုတ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဆောင်သောခရစ်ယာန်သည် စစ် မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ကို ပထမဆုံးသင်ယူလေ့လာရမည်။ ကျွန်တော်သည် ခရစ်တော် ကို မကိုးစားမှီ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်စစ်သားမဖြစ်မီ အခက်အခဲအချို့ကို ဖြတ်ကျော်ရပါမည်။ သင်သည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်ရမည်။
ယခု ကျွန်တော်ပြောနေသည့်အရာကို ယနေ့ခေတ်အသင်းတော် အတော်များများက လက်တွေ့မကျင့်သုံးကြပေ။ သို့ရာတွင် မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်။ “အုပ်စိုးသောသူဖြစ်လို လျှင် တိုက်ခိုက်ရမည်။ သတ္တိကို မွေးထားရပါမည်၊ သခင်။” ယင်းမှာ ၁၈ ရာစုက ဧဝံဂေလိ ဓမ္မ တေးရေးဆရာကြီးတစ်ဦးက ရေးသားသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှာ George Whitefield သို့မဟုတ် John Wesley တို့က တရားဒေသနာ မဝေငှခင် ဆီးနှင်းကြားက ဒူး ထောက်လျက် ထောင်ပေါင်းများစွာတို့က သီဆိုသောသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သောသီချင်းမျိုးကို ဘုရားကျောင်းတွင် ယနေ့အချိန်၌ ကြားရခဲပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သီဆိုသော သီချင်းစာအုပ်ထဲက “ခရစ်ယာန်တိုက်ပွဲ” အတိုင်း ဓမ္မသီချင်း နည်းပါးရသည့် အကြောင်း ကို စဉ်းစားမိသည်။ ခရစ်ယာန်တိုက်ပွဲနှင့်အထူးတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောဓမ္မသီချင်း များသည် ၁၈ ရာစုက Isaac Watts ရေးသားသော “ကျွန်ုပ်ကား တိုင်တော်စစ်သားဖြစ်သလော” သီချင်းထက် လူသိနည်းပါးကြပါသည်။”
ထိုသီချင်းက သတင်းကောင်းကို သယ်ဆောင်လာသည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော် များထံတွင် မည်သည့်အချိန်၌ ဧဝံဂေလိတရား စတင်ဟောကြားသနည်း။ ၁ ကော ၁၅း ၃၊ ၄ က ဧဝံဂေလိတရား၏အခြေခံသဘောတရားကို တင်ပြထားပါသည်။
“ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့ကို ရှေးဦးစွာ အပ် ပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာ လာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။ သင်္ဂြိုလ် ပြီးမှ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထ မြောက်တော်မူ၏။” ( ၁ ကော ၁၅း ၃၊ ၄ )
ယေရှုက သူ့နောက်သို့လိုက်ပြီး တစ်နှစ်ကြား ပြီးနောက်၌ သာ တပည့်တော်များကို ဧဝံဂေလိ အကြောင်း စတင်ပြောကြားသည်။ ထိုအကြောင်းကို မဿဲ ၁၆း ၂၁၊ ၂၂ တွင် မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။
“ထိုမှတပါး ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်။ လူအ ကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌ များစွာ ခံရမည်။ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းခံရမည်။ သုံးရက်မြောက် သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများကို ထိုအခါ မှစ၍ တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပေတရုသည် ကိုယ်တော်ကို မိမိနှင့်အတူခေါ်၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်၌ ဤသို့မ ဖြစ်ပါစေနှင့်။ဤအမှုသည် ကိုယ်တော်၌မရောက်ရဟု အပြစ်တင် သောစကားကိုလျှောက်သော်။” ( မဿဲ ၁၆း ၂၁၊ ၂၂ )
ပေတရုသည် ယေရှုနောက်တော်သို့ တစ်နှစ်ခန့်လိုက်သည်။ သို့သော် ပေတရုက “အသေသတ်ခြင်းခံရမည်၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်” ( မဿဲ ၁၆း ၂၁ ) ဟု မိန့်ဆိုသော ကြောင့် ယေရှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ ပေတရုသည် ယေရှု၏တပည့်တော် တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်အထိ ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်း နားမလည်သေး သည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။
ထိုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ယေရှုသည် တပည့်တော်များကို ဧဝံဂေလိ တရားအကြောင်း ထပ်၍ပေးသည်။
“ဂါလိလဲပြည်၌နေကြစဉ်တွင် ယေရှုက၊ လူသားကို လူတို့လက်သို့ အပ်နှံရသောအချိန်နီးပြီ။ သူတို့သည် သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ သူတို့သည်လည်း အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြ၏။” ( မဿဲ ၁၇း ၂၂၊ ၂၃ )
သူတို့သည် ယေရှုရုပ်ပြောင်းသည်ကို မြင်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှု ရုပ်ပြောင်းလဲသည်ကို မြင်ကြပြီး မကြာမီ တပည့်တော်များသည် လူငယ်လေးအထဲက နတ်ဆိုးကို နှင်မထုတ်နိုင်ဖြစ် ကြသည်။ သူတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ထိုနတ်ကို နှင်မထုတ်နိုင်ကြသည်အကြောင်း မေးကြ သောအခါ ယေရှုက “သင်တို့၏မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်” ( မဿဲ ၁၇း ၂၀ ) ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ထို့ နောက် ယေရှုက “သူတို့သည် လူသား ( ယေရှု ) ကို သတ်ကြလိမ့်မည်၊ သူသည် ( ယေရှု ) သုံးရက်မြောက်သော နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မည်” ဟု ဧဝံဂေလိအကြောင်းကို တဖန် ပေးပြန်သည်။ ထိုအခါ ( တပည့်တော်များ ) သည် အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းကြသည်။” ( မဿဲ ၁၇း ၂၃၊ NKJV) တပည့်တော်များက ဧဝံဂေလိတရားကို နားမလည်နိုင်ကြသေးပေ။
တတိယအကြိမ် ယေရှုက တပည့်တော်များအား ဧဝံဂေလိတရားကိုပေးသည်မှာ မဿဲ ၂၀း ၁၇-၁၉ တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်တူကျမ်းပိုဒ်မှာ လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၄ ဖြစ်ပါသည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တကျိတ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊ ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ ပရောဖက် များရေးမှတ်သမျှသည် လူသား၌ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ တပါးအမျိုး သားတို့လက်သို့အပ်နှံခြင်း၊ ပြက်ယာယ်ပြုခြင်း၊ ညှင်းဆဲခြင်း၊ တံ တွေးနှင့်ထွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် လူသားကို ရိုက် ပုတ်၍သတ်ကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက် တော်မူလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုစကားတော်တခွန်းကိုမျှ တ ပည့်တော်တို့သည် နားမလည်ကြ။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ဝှက် ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ မိန့်တော်မူချက်အနက်ကို မရိပ်မိကြ။” ( လုကာ ၁၈း ၃၁-၃၄ )
နှစ်နှစ်ခန့် သူတို့ကို ယေရှုသွန်သင်ပြီးနောက် တပည့်တော်များသည် ဧဝံဂေလိတရားအ ကြောင်းကို နားမလည်ကြသေးပေ။
“ထိုစကားတော်တခွန်းကိုမျှ တ ပည့်တော်တို့သည် နားမလည်ကြ။ ထိုအကြောင်းအရာသည် ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ မိန့်တော် မူချက်အနက်ကို မရိပ်မိကြ။” ( လုကာ ၁၈း ၃၄ )
ဧဝံဂေလိတရားကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားသိရသော်လည်း တပည့်တော်တို့သည် ယေရှု မိန့်ဆိုထားသောအရာကို နားလည်ဟန်မရှိကြသေးပေ။
ယေရှုက “နှစ်ရက်လွန်လျှင် ပဿခါပွဲရှိသည်။ လူသား ( ယေရှု ) သည် လက်ဝါးကပ် တိုင်၌ အသေသတ်ခြင်းခံရမည်” ( မဿဲ ၂၆း ၂ ) ဟု တဖန် မိန့်တော်မူသည်။
ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို အဖန်ဖန်အခါခါ ကြားရပြီးနောက် ယုဒရှာကာရုတ်က ယေရှုကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတို့ထံ ရောင်းစားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ( မဿဲ ၂၆း ၁၄၊ ၁၅ )
ယေရှုသည် နောက်တဖန် ဧဝံဂေလိတရားကို ပေးသည်။ ( မဿဲ ၂၆း ၃၁၊ ၃၂ ) ပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်များသည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်၌ ငိုက်မြည်းအိပ်ပျော်ကြ သည်။ ယေရှုကိုဖမ်းရန် လမ်းပြရောက်လာသောအခါ ပေတရုသည် မိမိထားအိမ်ထဲက ထား ကိုယူ၍ အစောင့်ကို ခုတ်ရန်ကြိုးစားသည်။ “ထိုအခါ တပည့်တော်တို့သည် သူ့ကို ( ယေရှု ) ထားခဲ့၍ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။” ( မဿဲ ၂၆း ၅၆ )
ယခု နောက်ဆုံးတွင် အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်း၊ တပည့်တော် တစ်ဆယ့်တစ်ယောက် ၏ ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲသေ သဖြင့် အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းကို မခံစားခဲ့ရပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောယေရှုကို အခြား တပည့်တော်များက တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူခံရသောဝေဒနာကို တပည့်တော်များကို ပြသခဲ့သည်။
“ထိုအခါ၊ ကျမ်းစာကို နားလည်စေခြင်းဌါ တပည့်တော်တို့၏ဥာဏ် ကိုဖွင့်တော်မူလျှင်၊” ( လုကာ ၂၄း ၄၅ )
သူတို့၏အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းသည် ဤနေရာတွင် အစပြုပါသည်။ ယေရှုသည် “၎င်းတို့၏နားလည်ခြင်းကို ဖွင့်ပေးထားသဖြင့်၊ သူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားနှင့်ပတ်သက်သော သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်လာကြသည်။” (လုကာ ၂၄း ၄၆ )
ယခုတွင် ရှင်ယောဟန် ၂၀း ၂၁-၂၂ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဤနေရာတွင် တပည့်တော် များ၏အသစ်မွေးဖွါးခြင်းကို တွေ့ရသည်။ ထမြောက်သောယေရှုသည် သူတို့ထံသို့ ရောက် လာသည်။
“တဖန် ယေရှုက၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ ခမည်း တော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကို ငါစေ လွှတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ထိုသူတို့အပေါ်၌မှုတ်လျက်၊ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော့။” ( ယော ဟန် ၂၀း ၂၁၊ ၂၂ )
သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လက်ခံရရှိကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။
ခေတ်ဟောင်းအနက်ဖွင့်သူက ထိုအကြောင်းကို သဘောတူပါသည်။ မဿဲဟင်နရီ စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် John Charles Ellicott ၏ လုကာ ၂၄း ၄၅ ကိုလည်း ဖတ်သင့်သည်။ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က “သခင်ယေရှုသည် သူတို့အပေါ် တိုက်ရိုက်မှုတ်သွင်းသည့်အချိန်၌ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လက်ခံရရှိကြ သည်။ သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အသစ်ပြုပြင်သည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မှီ သူတို့ အထဲ၌ ဘုရားဝိညာဉ်တော် မကျိန်းဝပ်ပါ။ ..ယေရှုသည် သူတို့အထဲသို့ ထာဝရအသက်ကို မှုတ်သွင်းပေးလိုက်သည်။” (J. Vernon McGee, Thru the Bible, ယောဟန် ၂၀း ၂၂ မှတ်စု )
ဒေါက်တာ Thomas Hale က ဤအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ “တပည့်တော်များ၏အသက်တာ၌ ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးထားခြင်းသည် အလွန်ပင် အရေးကြီး သည့် အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထို့နောက်မှသာ သူတို့သည် ကယ် တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ စစ်မှန်ပြီးပြည့်၀သော ယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံရရှိကြသောအချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်အသက်တာကို သူတို့ရရှိသည့် အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ (Thomas Hale, M.D., လက်တွေ့အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်း၊ ယောဟန် ၂၀း၂၂ မှတ်စု၊ စာ- ၄၄၈ )
တပည့်တော်များ၏အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းကို သင်ကြားပေးရသည့် အကြောင်းအ ရာနှစ်ခုအတွက် ဤအရာကိုပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁။	အသစ်မွေးဖွါးခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ခေတ်သစ်အမြင်သည် တပည့်တော် များက လိုက်နာကြသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ အသင်း တော်များက လက်တွေ့အသုံးပြုသော သီအိုရီများဖြစ်ကြ သည်။
၂။	တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းနည်းလမ်းတွင် နည်းဗျူဟာများကိုပေးပါ သည်။ ပထမအချက်၊ သူတို့ကိုသင်သောအခါ၊ နောက်ထပ် ၎င်းတို့ ပြောင်းလဲခြင်းအလုပ်ကို လုပ်သည်။ တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် အလစ် နည်းပညာ တွင် လေယာဉ်မောင်းသူက တစ်အုပ်တွင်ပေးထားသော ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည် ကျွန် တော်အမြင်ဆိုလျှင် မှားယွင်းသည်။ သူတို့မပြောင်းလဲမီ တပည့် တော်ဖြစ်စေရန် ယေရှုက မိန့်ဆိုသည်။
မဟာစေခိုင်းချက်ကြီးတွင် “တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်” ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို အမိန့်ပေးထားသည်။ ( မဿဲ ၂၈း ၁၉-၂၀ NASB)
“သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက် ခမည်း တော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။ ငါသည် သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော် တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည် လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မ ပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၂၈း ၁၉၊ ၂၀ )
ကျွန်တော်ရဲ့သင်းအုပ် ဒေါက်တာ Timothy Lin က ဤသို့ဆိုသည်။
ကြိယာတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သော “တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်း”သည် အမိန့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့် “သွားပါ” ဟူ သောအရာသည် အမိန့် ( ဤနေရာတွင် ) မဟုတ်ပါ။ သို့သော် “တပည့်တော်ဖြစ်စေပါ” ဟူသည်မှာ အမိန့်တော်ဖြစ်သည်။ မဟာ စေခိုင်းချက်၏ အဓိကျသောသော့ချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ( အ သင်းတော်ကြီးထွားခြင်းလှို့ဝှက်ချက်၊ စာ-၅၇ )
ခရစ်တော်က “လူသားအားလုံးကိုသင်ကြားပေးရန်” အမိန့်တော်ပေးထားသည်။ ပိုမိုတိကျစေ မည်ဆိုလျှင် “တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်” ပြုသည်။ W. A. Criswell. အမေရိကန်စတင်တက် ကျမ်းစာက ထိုနည်းအတိုင်းပင် “တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
ပထမနှစ်ပေါင်းသုံးရာခန့်တွင် ထိုနည်းအတိုင်းပြုကြသည်။ တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအ ကြောင်းကို နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းမတိုင်မီ သင်ကြားပေးရမည်။ ခရစ်ယာန်သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက် တာ Philip Schaff က “ဤသွန်သင်ချက်၏ (အတိုင်းအတာ) ကို တခါတရံ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ် စသဖြင့် သတ်မှတ်ထားရမည်။” Hippolytus သည် အေဒီ ၂၁၇ မှ ၂၃၅ ခုနှစ်အထိ ရောမ ဘီးရှောခ်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Hippolytus က “နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်သူအ ဖြစ်သုံးနှစ်ခန့် ( သူတို့ကို ) အချိန်သုံးစေရပါမည်။” (The Apostolic Tradition of Hippolytus, အပိုင်း ၂ )
ဤတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကာလသည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမတိုင်မှီကဖြစ်သည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက တမန်တော်စာအုပ်ထဲတွင် ရှားစေထုတ်သူများအကြောင်း သင်ကြားပေးသည်။ ဗာနဗသည် ပေါလုကို အန္တီအုတ်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
“ထိုသူတို့သည် တနှစ်ပတ်လုံး ထိုအသင်းတော်နှင့်အတူစည်းဝေး၍ လူများအပေါင်းတို့အား ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏။” ( တမန် ၁၁း ၂၆ )
ပေါလုက လေရှိ၊ အိုင်ကော်မီယမ်၊ နှင့်တဖန် အန္တီအုတ်မြို့တွင် ထိုနည်းတူစွာ လုပ်ဆောင်ပါ သည်။
“ထိုသို့ပြန်ကြစဉ်၊ တပည့်တော်များ၏စိတ်နှလုံးကို မြဲမြံခိုင်ခံ့စေသ ဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မည်အကြောင်း နှိုးဆော်ချီပင့်၍၊ ငါ တို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရကြမည်ဟု ဟောပြောပြညွှန်ကြ၏။” ( တမန် ၁၄း ၂၂ )
ဒေါက်တာ Schaff က “အသင်းတော်သည် မှားယွင်းသောကမ္ဘာထဲ၌ ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားသောအမှုတော်ဆောင်များက ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအတွက် ( လူတို့ကို ) ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်သည်ကို မြင်ရသည်…. ( အခန်းများသည် ) ကမ္ဘာကြီးနှင့်အသင်းတော်ကို ခင်ပေးထားပါ သည်။ အစပြုသူများကို ရင့်ကျင့်သူများအဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပေးသည်။ ( သင်ယူလေ့လာသူများ ) ကို မယုံကြည်သူများအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါ။ သို့သော် တဝတ်တပျက်သာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြ သော ( တပည့်တော်မဟုတ်သူများ ) ဖြစ်ကြသည်။ ( ခရစ်ယာန်အသင်းတော်သမိုင်း၊ အတွဲ ၂၊ စာ-၂၅၆ ) ဒေါက်တာ Schaff က ဤနည်းဗျူးဟာသည် သာသနာလုပ်ငန်းတွင် “အဓိကသော့ ချက်” ဖြစ်ပါသည်။ ( ၎င်း၊ စာ-၂၅၆ )
ယနေ့မနက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမနက်အစီအစဉ်ကို တပည့်တော်ဖြစ်သင်တန်းအနေ ဖြင့် ပြောင်းလဲကြမည်။ ကလေးများကို စောင့်ထိန်းရန် အသင်းတော်၏ဆုံးနိမ့်ခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီး ၏လှည့်ဖြားမှုထဲက လူငယ်များကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းကို အသင်းတော်များက ယနေ့လူ ငယ်များကို မကောင်းသောသူများ၊ အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းမခံမီ တပည့်တော်ဖြစ်ရမည့် ဘုရားမဲ့သူများ၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌အသက်ရှင်ခြင်းတို့ကို သတိပြုရန်လိုအပ်သည်ဟူ သောအချက်ကို ရှင်ဖွေသည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံသည်။ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း အသင်းတော်ဝင်ပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ၎င်း၌ “ထက်ဝတ်” ခန့် သာ ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် တပည့်တော်များမဟုတ်ဘဲ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရုံ သက်သက်သာဖြစ်ကြသည်။ John S. Dickerson က လူငယ်ခရစ်ယာန်များ၏ဧဝံဂေလိခရစ် ယာန်ရာခိုင်နှုန်းသည် “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌ တပည့်တော်သစ်များ မမွေးထုတ် နိုင်လျှင် ၇ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄ ရာခိုင်နှုန်း သို့ မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သို့ ကျဆင်းသည်။ (The Great Evangelical Recession, စာ- ၃၁၄ )
ထိုအရာသည် ကျွန်တော်တို့၏ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် တို့၏ပန်းတိုင်မှာ ခရစ်တော်၏မြင့်မားသောအဆင့်တစ်ခုဆီသို့ လူ ငယ်များရောက်ရှိအောင် အကူအညီပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် တို့ ဤနေရာ၌ရောက်ရှိနေခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်၌ရှိ သော လူငယ်များကို အကူအညီပေးဖို့၊ ယေရှုတပည့်တော်ဖြစ်လာ ကြဖို့၊ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြဖို့၊ ခရစ်တော်ထံမှ သင်ယူလေ့လာ မှုကိုပြုရန် အခြားသူများကို အသင်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာနိုင် သည့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့၊ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး ကယ် တင်ခြင်းရရှိကြဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ခံထားရသောလူငယ်များသည် ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုခုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအ တွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိ၊ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေသောသူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ် ကို အချည်းနှီးဖြစ်စေသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ထိုသို့မဖြစ်ကြရန် အလိုရှိသည်။ သို့ သော် သူတို့သည် ထိုသို့ဖြစ်မည်မှာ အတွေ့အကြုံအားဖြင့် သိရသည်။ သင်တို့သွားသည့်အ ခါ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ ယေရှုက “ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိသော်လည်း ရွေး ကောက်သောသူနည်း၏” ဟူသော ယေရှုစကားကို သတိရပါ။ စစ်မှန်သောပြောင်းလဲသူ တပည့်စစ်များသာလျှင် တည်နေကြလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ အတူတကွချီတက်လျက် ကျွန်တော်တို့၏ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင် လျက်၊ တန်ခိုးတော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသေးသည်ဟု ကမ္ဘာကြီးအား ကြော်ငြာကြပါစို့။ ကျွန်တော် တို့သည် အတိတ်က အမှားကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အမှားထဲက အကျိုးရှိပြီး အတွေ့အကြုံကောင်းကို ရရှိကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဆုံးရှုံးခြင်းကို အောင်မြင်ခြင်းသို့ ပြောင်းကြပါစို့။ ယနေ့ မှားယွင်းသောအားနည်းချက်များထဲက ခိုင်မာသောအသင်းတော်၏တ ပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းကိုဖန်တီးသည့် ခြေလှမ်းကို စတင်လှမ်းခြင်းဖြင့် သာ၍ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုကို ရရှိကြမည်။ ကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်မည်မဟုတ်၊ အရှုံးမပေးမည်ကို သတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့၏ကောင်းသောအသင်းတော်သည် ကြီးမားသောအသင်းတော် မဖြစ်သ၍ လုံး၀ အရှုံးပေးကြမည်မဟုတ်။ ထိုအရာမှာ လူငယ်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီး အသစ်တဖန် ပြောင်းလဲသော တပည့်တော်စစ်တပ်ကို ဖန်တီးယူသည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သင်တို့၏ သီချင်းစာရွက်တွင် နံပါတ်ခြောက်ကို သီဆိုကြပါစို့။ “ကျွန်တော်သည် ကားတိုင်တော်စစ်သူရဲ ဖြစ်သည်ကျူး” ဖြစ်၍ ဒေါက်တာ Isaac Watts ( ၁၆၇၄- ၁၇၄၈ ) က ရေးစပ်သည်။
ပန်းတော်သာအိပ်ယာခင်းရှိရာ မိုးကောင်းကင်သို့ ကျွန်ုပ်သယ်ဆောင်သွားရမည်၊
အခြားသူများက ဆုလဒ်အတွက် တိုက်ခိုက်စဉ် အသွေးလွှမ်းသောပင်လယ်ကို ရွှင့်လွှတ်၊
ရင်ဆိုင်ရာ ရန်သူမရှိဘူးလား၊ လှိုင်းလုံးပင်စင် ကူးဖြတ်၊
ဤဆိုးသွင်းကမ္ဘာကြီးသည် မိတ်ဆွေလား၊ ဘုရားသခင်ထံပါးသို့ ကူညီဖို့။
( “ကားတိုင်တော်စစ်သူရဲတစ်ဦးဖြစ်သည်ကျူး”, ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ )။
“ကားတိုင်တော်စစ်သားဖြစ်သည်ကျူး” ( ဒေါက်တာ Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ရေးစပ်သည်။ )